Labo Wasaaradood oo Somaliland ah oo iskula dheggan geed la jaray & Wasaarad hanjabaad soo saartay | Hadalsame Media
Home Wararka Labo Wasaaradood oo Somaliland ah oo iskula dheggan geed la jaray &...
Labo Wasaaradood oo Somaliland ah oo iskula dheggan geed la jaray & Wasaarad hanjabaad soo saartay
(Ceerigaabo) 06 Agoosto 2020 – Wasiirka Deegaanka Somaliland, Shukri Xaaji Baandare, ayaa cambaaraysay geed qar kaga yaalley Buurta Daalo oo uu shalay gooyey nin ka tirsan Booliiska Somaliland.
Marwo Baandare ayaa sheegtay in ay wasaaradeedu sharciga la tiigsan doonto askartii goysay geedkii ku yaalley Buurta Daalo ee gobolka Sanaag oo ay ku tilmaantay mid lahaa muhiimad gaar ah.
Arrintan ayaa ka dhigan in ay haatan doodi dhex taallo Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland oo ay Booliisku hoos tagaan iyo midda Degaanka.
Goynta geedka ayaa timid kaddib markii beryahan ay Buurta Daalo ee ku taalla gobolka Sanaag ee woqooyiga Somalia kasoo korortay arrin cusub oo ah dhallinyaro sawir dartii naftooda halis u gelinaya.
Booliiska Somaliland ayaa deeto jaray geedkaa ku yaalley buurta Daallo ee gobolka Sanaag, kaasi oo ay dhalinyaradu bilaabeen inay isku sawiraan, iyagoo halis nafeed u bandhigan.
Waa arrin wanaagsan haddii la helay dood ku aaddan in geed la badbaadiyo, waloow ay dadkiiba dhimanayaan.
Previous articleArrin khiyaano ah oo ay GANACSATADA Soomaalidu ku kacaan oo laga dayriyey (Arag waxa khaldan)
Next articleDAAWO: ”Farxadaydii waxay isu rogtey qamuunyo!” – Qaraxii Beyruut oo qaflad ku qabtay aroos ka dhacayey meel u dhow + Sawirro